PU Leather Fekitori, Vatengesi - China PU Leather Vagadziri
Leather Mota Tsoka Mat
0.45mm-1.5mm PU Chakagadzirwa Leather PU Chinyorwa cheCar Seat Cover
Inofananidzwa nePVC yeganda, PU dehwe rine zvirinani ruoko kunzwa pamwe nekupfeka kuramba. Iyo PU yeganda inogadzirwa naBensen inharaunda-inoshamwaridzika, kana iwe uchida PU dehwe, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu.
PU Vegan Leather Mugadziri weMotokari Upholstery
Mukutanga kuvandudzwa kwePVY tekinoroji tekinoroji, Domestic synthetic emabhizinesi akasaririra kumashure kumashure kweEurope. Asi mukutsvagisa uye kushandiswa kwePU yekugadzira yeganda, tinoramba tichienderana neyekunze tekinoroji maitiro nekutanga kutanga, kukwirira kutanga, kukurumidza kusimudzira kumhanya, uye rave muzinda wePU yekugadzira yeganda muChina.
Isina-yakarukwa Inotsigira Yakadzokororwa PU Leather Yakachengeteka hapana Peel
PU chakagadzirwa nedehwe, maererano nekemikari dhizaini, iri padyo nemasikirwo ematehwe, saka haazove akaomarara uye anopwanya, uye panguva imwechete ine zvakanakira mavara akapfuma uye mapatani mazhinji.
PU Leather Microfiber yeMota, Isina Mota Chigaro, Mota Kuchengeta
Iine kukurumidza kukura kwePU (polyurethane) yekugadzira yeganda tekinoroji, mimwe mitezo mitsva yemhando dzepasi rose yakatanga zvishoma nezvishoma kushandisa PU synthetic dehwe uye inokoshesa kukwirira kwemuviri wePU yekugadzira dehwe.
Eco-Inoshamwaridzika Polyurethane Vegan Leather Chakagadzirwa PU Chinyorwa
Mota Upholstery PU Chinyorwa Leather Polyurethane Fake Leather
PU chakagadzirwa nedehwe chinhu chakagadzirwa nevanhu chakaita zvokugadzirwa zvinhu pamwe unaku hweganda, yakasimba chaizvo uye yakasimba, uye isingadhuri.
China Inopa Red PU Yakagadzirwa Leather Auto Kushongedza
Iyo pu microfiber synthetic dehwe inochengetedza hunhu hweganda rechisikirwo senge kufema, hunyoro hunopinza, nyoro, kupfeka uye kugadzikana, nezvimwe. Isu tinopa anopfuura makumi maviri mavara kune ako sarudzo.
Yakakwira Hunhu Microfiber Inotsigirwa PU Leather Chinyorwa Chekutengesa
Iyo ine yakanaka tensile simba pane yakaderera tembiricha, yakanaka kupokana kune mwenje kuchembera uye hydrolysis kugadzikana.
Yakanakisa Yemhando PU Leather YeMotokari Upholstery Leather
Ruoko ruviri rwePU Polyurethane Synthetic Leather Mistureproof
PU microfiber chakaita zvokugadzirwa nedehwe, kusangana nevanhu kudiwa kuti zvinonyatsorehwa runako uye kugadzikana zvinhu zvemukati, kusanganisira zvemukati zvinhu vanonzwa nyoro, vakasununguka kuti kubatwa vaima, muenzaniso uye yose motokari magadzirirwo inowirirana.
Yakakwira Hunhu PU Synthetic Leather yeMota Yemukati Kushongedza
PU ganda rekugadzira rinogona kusangana nezvinodiwa zvekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, mushure mekuparadzwa kwemota dzemukati zvinhu hazvizosvibisa nharaunda, zvinogona kudzokororwa.
Yakagadzirwa Leather PU zvinhu Zvemotokari Upholstery Leather mupi
Iyo nyowani mota PU zvinhu zvine yakanakisa mehendi zvivakwa, hydrolysis kuramba, kupisa kupisa, oxidation kuramba uye kupfeka kuramba kwave kushandiswa zvakanyanya mumotokari magear armrests, zvigaro, varindi vemusuwo uye zvimwe zvinhu.